အသုံးပြုခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
(02 / 05 / 2018 ၏အဖြစ်ထိရောက်သော)
ယင်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် “ အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ်များ” ဆိုဒ် (BESTFOREXEAS) ထိုသုံးစွဲသူများသည်သင့်ဖြစ်ရပ်တစ်အမှတ်ရစရာတဦးတည်းဖြစ်စေခြင်းငှါစုံလင်သောနေရာနှင့်စျေးသည်များကိုရှာဖွေတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောပလက်ဖောင်းပေးပါသည်။ သငျသညျကနေတစ်ဆင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများရှုမြင်သို့မဟုတ်အသုံးပြုတဲ့အခါအောက်ပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလျှောက်ထား https://www.bestforexeas.com
ဂရုတစိုက်အောက်ပါဝေါဟာရများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ကွိုးစားကွပါ။ အဆိုပါ BESTFOREXEAS ပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်တို့သည်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များရန်သင့်သဘောတူညီချက်ဆိုလို။ သင်တို့သည်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောမတူဘူးဆိုရငျ, သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ကိုဝင်ရောက်ဒါမှမဟုတ် BESTFOREXEAS ပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမသုံးနိုငျသညျ။
BESTFOREXEAS အားလုံး၎င်း၏က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများအများ၏ privacy ကိုလေးစားပါသည်။ ကျနော်တို့အလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့ privacy နဲ့လျှို့ဝှက်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးယူပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်အားလုံးကိုဧည့်သည်များဟာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုသူတို့အနေဖြင့် unintended မဆိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေနှင့်မတော်တဆတတိယပါတီ၏လက်တော်သို့ကျမည်မဟုတ်ကြောင်းသိရန်ခွင့်ရှိသည်နားလည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီအမေရိကန်နှင့်အတူလိုက်လျော & ဗြိတိန်ဥပဒအညီအီးယူအထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေ (GDPR) ကလိုအပ်ကြောင်းအပါအဝင်အကောင်အထည်ဖော်။ ပညတ္တိကျမ်းသင့်အခွင့်အရေးများနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ထိန်းချုပ်မှုပတ်သတ်ပြီး၌သငျကြှနျတျောတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားအကြောင်းသင့်ပြောပြရန်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျမှာပေးအပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖတ်ပြီးကြောင်းတောင်းခံနေဖြင့်ယခုဤအမှုကို www.knowyourprivacyrights.org
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထွက် set အဖြစ် မှလွဲ. ငါတို့သည်ငါတို့၏ website မှတဆင့်ကောက်ယူမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များအားမျှဝေ, ဒါမှမဟုတ်ရောင်းချ, ဒါမှမဟုတ်တတိယပါတီမှထုတ်ဖော်မရကြဘူး။
BESTFOREXEAS Forex Market ကအပေါ်ကုန်သွယ်များအတွက်အကောင်းဆုံး automated ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်ရာအောင်မြင်သောကုန်သည်တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကအသိုင်းအဝိုင်းက 2011 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
Forex ကုန်သွယ်နိုင်အောင်ခက်ခဲသည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့အဆိုအရသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်စေဖို့ကူညီပေးပါမည်။ Forex ကုန်သည်တစ်ဦးကအများကြီးနီးပါးမျှအောင်မြင်မှုနှင့်အတူကုန်သွယ် Forex ၏နှစ်ပေါင်းသုံးဖြုန်း, ဒါပေမယ့်ဒီ Forex စက်ရုပ်ကယ့်ကိုသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အောင်မြင်မှုတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးပါမည်ကြောင်းသေချာစေရန်မှတ်တမ်းများတစ်ဦးသက်သေပြချက်လမ်းကြောင်းသည်။
BESTFOREXEAS 300 + FX ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ထက်ပိုထံမှပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်သက်သေရလာဒ်များနှင့်အတူသငျသညျပေးပါသည်။
REGISTRATION; THE Forex ထုတ်လုပ်မှု၏အသုံးပြုသူလုပ်ဆောင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်စည်းမျဉ်း
သင်တို့အဘို့အမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့် BESTFOREXEAS ထုတ်ကုန်များ & က်ဘ်ဆိုက်သုံးစွဲဖို့ကအနည်းဆုံး 18 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သငျသညျသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေ BESTFOREXEAS က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူက register လုပ်သွားသူတစ်အသုံးပြုသူ, cryptocurrency စျေးကွက်ထုပ်, အညွှန်းကိန်းများနှင့်မဆို cryptocurrencies ပစ္စည်းမှန်လျှင်, သူ / သူမ BESTFOREXEAS က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ဖို့သင့်နာမည်အပြည့်အစုံနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပါဝင်သောကြှနျုပျတို့၏ website များတွင်ကိုယ်ပိုင် account ကိုဖန်တီးရန်ရှိရမည် နှင့် BESTFOREXEAS ကနေမြှင့်တင်ရေးမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိရန်။
သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏မည်သည့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးစွဲခြင်း၏ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားရန်သဘောတူသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျ BESTFOREXEAS သင့်နာမည်အပြည့်အစုံနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးစွဲခြင်းထဲကပေါ်ထွက်လာသောဆို liabilities, ဆုံးရှုံးမှု, ဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေကြောင်းသဘောတူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင် third party ကြော်ငြာခြင်း
တတိယပါတီများကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ကြေငြာလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာခုနှစ်တွင်ထိုပါတီများ, ၎င်းတို့၏အေးဂျင့်သို့မဟုတ်ထိုသူတို့အဘို့အလုပ်လုပ်အခြားကုမ္ပဏီများကသူတို့ကြော်ငြာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ပြသသည့်အခါအလိုအလျှောက်သင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းကြောင်းနည်းပညာသုံးနိုင်ပါသည်။
BESTFOREXEAS သည်ဤပါတီများရယူဤနည်းပညာများသို့မဟုတ် data ကိုကျော်မျှမထိန်းချုပ်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤ privacy ကိုအသိပေးဤတတိယပါတီများ၏သတင်းအချက်အလက်များအလေ့အကျင့်ကိုဖုံးလွှမ်းမထားဘူး။
ဤသည်ကိုတစ်ဦး Affiliate အဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်သင့်စွမ်းရည်၌သငျတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးပြီးမှသတင်းအချက်အလက်များသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုရညျညှနျးခဲ့ကြကြောင်းဧည့်သည်ကိုအသိအမှတ်မပြုရန်ခွင့်ပြုသည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောရည်ညွှန်းများအတွက်ကြောင့်ကရက်ဒစ်မှသင်တို့ဆီသို့ကော်မရှင်။ ဒါဟာအစကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့ဆီသို့ကော်မရှင်လွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။
BESTFOREXEAS အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုမပေးပါ။ BESTFOREXEAS သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးမျိုး၏စည်းကမ်းချက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များထိန်းသိမ်းမှုများလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ကျနော်တို့ဆို Affiliate သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ဤမူဝါဒအပြန်အလှန်ဖော်ဆောင်ရန်သဘောတူရန်မျှော်လင့်ထား။
စနစ်ဖြင့် WE စုစည်းရရှိသည့်သတင်းအချက်အလက်များအသုံးပြုမှုသင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်တဲ့အခါ
ကွတ်ကီးများသည်သေးငယ်သည့်စာသားဖိုင်များဖြစ်ပြီးသင်၏ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမှသင်မည်သည့် website ကိုမဆိုလည်ပတ်သောအခါသင်၏ hard drive တွင်ထည့်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုတွင်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအခြားတစ်ခုတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်အထိသိမ်းဆည်းထားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်သင့်အားကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်အားသင် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသင်မည်သို့အသုံးပြုသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်စာရင်းဇယားများနှင့်အတူတိုးတက်စေရန်အတွက်ခွင့်ပြုသည်အထိသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
တချို့က cookies များကိုထိုကဲ့သို့သောတနေ့အဖြစ်သို့မဟုတ်သင်သင့် browser ကိုပိတ်လိုက်သည်အထိ, အချိန်တစ်သတ်မှတ်ကာလအဘို့ကြာရှည်စေနိုင်သည်။ အခြားသူများကအသတ်မရှိကြာရှည်။
အဆိုပါ BESTFOREXEAS က်ဘ်ဆိုက် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ server များပေါ်တွင်နှင့်သူ၏န်ဆောင်မှုကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုဖို့တတိယအုပ်စုတွေက operated ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုလုပ်ကိုင်ပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲခြင်းဖြင့်ချထားပါသည်။
သင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ, ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်တော်တို့ကို cookies တွေကိုသုံးစွဲဖို့ဆန္ဒရှိရှိမရှိကိုသင်မေးကြည့်ပါ။ သင်သည်ထိုသူတို့လကျခံဖို့မဟုတ်ကိုရှေးခယျြခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအခြားရည်ရွယ်ချက်အဘို့မိမိတို့အသုံးပြုမှုရဟုဝန်ခံကြပြီမဟုတ်ကြောင်းစံချိန်မှလွဲပြီးသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုအဘို့ထိုသူတို့အသုံးမရကြလိမ့်မည်။
သငျသညျ cookies တွေကိုသုံးစွဲဖို့မရရှေးခယျြသို့မဟုတ်သင့် browser setting ကိုမှတဆင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုတားဆီးလျှင်, သင်တို့၏ website ၏အပေါငျးတို့သလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကျနော်တို့ကအောက်ပါနည်းလမ်း cookies များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်:
သင်တို့သည်ငါတို့၏ BESTFOREXEAS က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသုံးပါကိုဘယ်လိုခြေရာခံဖို့
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာကျနော်တို့ဖော်ပြရန်တိကျတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများမြင်ကြပြီရှိမရှိမှတ်တမ်းတင်ရန်
သငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုး
သူတို့ကိုသင်ဖြည့်စွက်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်စစ်တမ်းများနှင့်မေးခွန်းရန်သင့်အဖြေကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်
သငျသညျအသိအမှတျပွုနှင့် BESTFOREXEAS နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ထုတ်ပေးသက်ဆိုင်သောမူပိုင်ခွင့်, အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးများအပါအဝင် BESTFOREXEAS က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်မျိုးသားအပေါငျးဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကြောင်းသဘောတူသည်။
BESTFOREXEAS က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ကြောင်းအခြားအကြောင်းအရာကိုလင့်များနှင့်ကုမ္ပဏီအမည်များကို၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ BESTFOREXEAS ဖော်ပြဒီသဘောတူညီချက်အောက်မှာသင်ကခွင့်မပေးသမျှသောအခွင့်အရေးများရှိသည်။
BESTFOREXEAS ကိုအီးမေးလ်နဲ့ messaging system ကိုတစျဆငျ့ကိုဖန်ဆင်းဆက်သွယ်ရေး, BESTFOREXEAS သို့မဟုတ် BESTFOREXEAS မှအသိပေးစာစာချုပ်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဥပဒေသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းများကလိုအပ်သည့်နေရာမဆိုအခြေအနေမှာသူ့ရဲ့အရာရှိများ, ဝန်ထမ်းများ, အေးဂျင့်သို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်များမဆိုမှဥပဒေရေးရာအသိပေးစာဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဥပဒေ Disclaimer (အာမခံ)
Forex ကုန်သွယ်သင့်ရဲ့ကနဦးအနည်ကျော်လွန်ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်မသင့်တော်သည်နှင့်သင်လိုအပ်ခဲ့လျှင်လွတ်လပ်သောအကွံဉာဏျကိုရှာသေချာသင်အန္တရာယ်ပါဝင်နားလည်စေသင့်ပါတယ်။ Forex အကောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်သြဇာ၏အမျိုးမျိုးသောဒီဂရီကမ်းလှမ်းနှင့်သူတို့၏မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းအလားအလာတစ်ခုအညီအမျှမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုအန္တရာယ်အားဖြင့် counterbalanced ဖြစ်ပါတယ်။
အတိတ်အတွေ့အကြုံနှင့် simulated ရလဒ်များကိုအနာဂတ်ဖျော်ဖြေပွဲ၏ညွှန်ပြမလိုအပ်ပါဘူးဖြစ်ကြသည်။ ဒီ site ပေါ်မှာရှိသမျှအကြောင်းအရာရေးသားသူတစ်ဦးတည်းသောအမြင်ကိုယ်စားပြုပြီးထုတ်ကုန်မဆိုအတွက်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြရန်ဝယ်ယူရန်တစ်ဦးအမြန်ထောက်ခံချက်ဖွဲ့စည်းမထားဘူး။
အမေရိကန်အစိုးရ REQUIRED Disclaimer
အနားသတ်အပေါ်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်အန္တရာယ်တစ်ခုမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုသယ်ဆောင်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်သင့်လျော်မည်မဟုတ်ပါ။ သြဇာ၏မြင့်ဒီဂရီသင်တို့အဘို့သကဲ့သို့ကောင်းစွာသင်တို့တဘက်၌အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မဆိုနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်မီ, သငျသညျဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်ရွယ်ချက်များအဆင့်များနှင့်စွန့်စားမှုအစာစားချင်စိတ်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေသင်သည်သင်၏ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအချို့သို့မဟုတ်အပေါင်းတို့၏ဆုံးရှုံးမှုရေရှည်တည်တံ့နိုင်ထို့ကြောင့်သင်ဆုံးရှုံးဖို့မတတ်နိုင်ကြောင်းပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမပေးသင့်ကြောင်းတည်ရှိ။
သင့်အနေဖြင့်အန္တရာယ်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုကုန်သွယ်နှင့်အတူပါဝင်, သင်မဆိုသံသယရှိပါကလွတ်လပ်သည့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးထံမှအကြံဉာဏ်ကိုရှာအံ့သောငှါသတိပြုမိဖြစ်သင့်သည်။ ရှင်းနေသည်မှာဤအမှုကိုနားလည်နိုင်; ဒီသင်တန်းတွင်ပါရှိသောသတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုတိကျတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကုန်သွယ်မှုတစ်ခုဖိတ်ကြားချက်ကိုမဟုတ်ပါဘူး။
ထရေးဒင်းအနာဂတ်အမြတ်များအတွက်လိုက်စားအတွက်ပိုက်ဆံဒီလောက်စွန့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဆုံးရှုံးဖို့မတတ်နိုင်ဆိုပိုက်ဆံအန္တာရာယ်မထားပါနဲ့။ ဤစာရွက်စာတမ်းအကောင့်သို့တစ်ဦးချင်းစီဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခွအေနမြေားကိုယူမထားဘူး။ ကိုယ်ကသာမဟုတျဘဲတစ်ဦးချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကွံဉာဏျအဖြစ်ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့အထူးသဖြင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အခြေအနေအဘို့သင့်လျော်သည်အဘယ်အရာကိုအတည်ပြုရန်မည်သူ, သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထံမှအကြံဉာဏ်များမရှိဘဲဤအပေါ်ပြုမူမထားပါနဲ့။ ကြိုတင်သရုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဉာဏ်ကိုရှာပျက်ကွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်သရုပ်ဆောင်သင်တို့ဆီသို့ဦးတည်သွားစေနိုင်ကြောင်း & မြို့တော်၏ဖြစ်နိုင်သောဆုံးရှုံးမှုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။
BESTFOREXEAS ထုတ်ကုန်များ & ဘ်ဆိုဒ်, ဘာအာမခံမရှိဘဲနဲ့ "ကဲ့သို့ဖြစ်၏" ပေးနေပါသည်။ အထက်ပါကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, BESTFOREXEAS ဖော်ပြ Limited မရှိဘဲနဲ့အပါအဝင် WEBSITE ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်မာတိကာအထူးရည်ရွယ်ချက်, TITLE, လုံခြုံရေး, တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် Non-ချိုးဖောက်မှုအတွက်ကုန်သည်, Fitness မဆိုအာမခံနှင့်ပတ်သတ်သော, အားလုံးအာမခံ, ဟုတ်မဟုတ် EXPRESS, အဓိပ်ပာ OR ပြဌာန်း DISCLAIMS ။
အထက်ပါကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, BESTFOREXEAS OR operating ကြှနျုပျတို့၏ website သို့မဟုတ်ပါဝင်မှု Access မရှိအာမခံ OR ကိုယ်စားပြုအခမဲ့မပြတ်မတောက် OR အမှား BE မညျစေသည်။ သင် FULL တာဝန်များနှင့်သင့် Downloads နှင့် / သို့မဟုတ်ဖိုင်များ, သတင်းအချက်အလက်များ, ထုတ်ကုန်များ, အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့၏ website မှရရှိသောအခြားပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုမှထွက်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ယူဆ။ တချို့ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် LIMIT သို့မဟုတ်အာမခံ၏ Disclaimer ခွင့်မပြုပါ, ဒါကြောင့်ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်သင်လျှောက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အပါအဝင် BESTFOREXEAS ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအကျိုးဆောင်နှင့်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်သင် BESTFOREXEAS ဘ်ဆိုဒ် OR ထုတ်ကုန်များ၏သင်၏အသုံးပြုမှု၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်သွယ်ပြောဆို OR interactive ဘယ်သူတွေနဲ့အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးနဲ့သင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် Interactive အားလုံးအတှကျဘဝါးတာဝန်ရှိသည် third party Links များသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူကို website မှတဆင့်သို့မဟုတ်အခြားနှင့်အတူမည်သည့် interactive ။
သင် BESTFOREXEAS SCREEN ကိုမထားဘူး OR third party Links များ, အသုံးပြုသူများသို့မဟုတ် BESTFOREXEAS ဘ်ဆိုဒ် OR ထုတ်လုပ်မှု၏အခြားအသုံးပြုသူများ၏နောက်ခံစုံစမ်းစစ်ဆေးမဟုတ်သလို BESTFOREXEAS Links များ, user နှင့် BESTFOREXEAS ဘ်ဆိုဒ် OR ထုတ်လုပ်မှု၏အခြားသတင်းများအေးဂျင့်ကြေညာချက်ကိုအတည်ပြုရန်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စေပါဘူးနားလည်ပါတယ်။
BESTFOREXEAS third party Links များ, အသုံးပြုသူများသို့မဟုတ် BESTFOREXEAS ဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုဒါမှမဟုတ် BESTFOREXEAS ဘ်ဆိုဒ် OR ထုတ်လုပ်မှု၏လက်ရှိသို့မဟုတ်နာဂအသုံးပြုသူသို့မဟုတ် vendor နှင့်အတူ၎င်းတို့၏လိုက်ဖက်တဲ့အခြားအေးဂျင့်များ၏အပြုအမူအဖြစ်ကိုယ်စားပြုခွင့်မ OR အာမခံစေသည်။
သင်ထိုကြောင့် BESTFOREXEAS website နှင့်ထုတ်လုပ်မှု၏အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်သင် BESTFOREXEAS ဘ်ဆိုဒ် OR ထုတ်ကုန်များ၏သင်၏အသုံးပြုမှု၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်သွယ်ပြောဆို OR interactive ဘယ်သူတွေနဲ့အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအားလုံးကိုဆက်သွယ်ရေးနှင့် Interactive IN အကြောင်းပြချက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူသဘောတူသည်။
liabilities ၏သီးသန့်ရှိရသော Limited
သက်ဆိုင်ဥပဒေအရခွင့်မပြုကြောင်းမည်သည့်လမ်းအတွက်မဆို liabilities ကန့်သတ်; သို့မဟုတ်
သက်ဆိုင်ဥပဒေအရဖယ်ထုတ်လိမ့်မပြုစေခြင်းငှါမဆို liabilities ဖယ်ထုတ်ရန်။
BESTFOREXEAS အချိန်ကနေအဖြစ်လိုအပ်သောအချိန်အသုံးပြုမှုစာမျက်နှာ၏ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုအပ်ဒိတ်လုပ်လိမ့်မည်။ သငျသညျလျှောက်ထားသောအသုံးအနှုန်းများသူတို့အားသင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုနေ့၌ကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာကဒီမှာ posted နေကြသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျဤစာမျက်နှာဂရုတစိုက်ဖတ်ပါသို့မဟုတ်သင့်မှတ်တမ်းများများအတွက်မိတ္တူ print ထုတ်ဖို့အကြံပြုသည်။
သငျသညျကိုအသုံးပြုခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းများနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကမှာအီးမေးလ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected]
ဒီသဘောတူညီချက်မဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမမှန်ကန်ပါသို့မဟုတ်မပြုနိုင်ကျင်းပလျှင်, သဘောတူညီချက်၏အဘို့ကိုသက်ဆိုင်ဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်ပါလိမ့်မယ်။ ကျန်ရှိနေသေးသောဝေမျှပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု၌တည်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီသဘောတူညီချက်မဆိုပြဋ္ဌာန်းချက်ပြဋ္ဌာန်းရန်မှ BESTFOREXEAS ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်မဆိုပျက်ကွက်ထိုကဲ့သို့သောပြဋ္ဌာန်းချက်ပြဋ္ဌာန်းရန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်တစ်ဦးစွန့်လွှတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ဒီသဘောတူညီချက်အောက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများသည်ဤသဘောတူညီချက်မဆိုရပ်စဲရှင်သန်လိမ့်မယ်။
သငျသညျအရေးယူမှုများ၏အကြောင်းရင်း accrues ပြီးနောက်အရေးယူမှုနှင့်ဆက်စပ်သောသို့မဟုတ် BESTFOREXEAS နှငျ့သငျ့ဆကျဆံရေးထဲကပေါ်ထွက်လာသောမဆိုအကြောင်းမရှိ ONE တစ်နှစ်အတွင်းစတင်ရမည်ကိုသဘောတူသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လုပ်ဆောင်ချက်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းမရှိအပြီးအပိုင်ပိတ်ပင်သည်။
သင်စည်းကမ်းချက်များသိကျွမ်းသူများရဲ့အသုံးပြုရန်ဤသတ်မှတ်ချက်များဖတ်ရန်ဖူးအသိအမှတ်ပြု, နှင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်အတူတကွမူပိုင်ခွင့်မူဝါဒအသုံးပြုခြင်း THE BESTFOREXEAS စည်းကမ်းချက်များအသိအမှတ်ပြုအမေရိကန်နှင့်အိုင်တီ၏ပါးစပ်သို့မဟုတ်စ Written မဆိုအဆိုပြုလွှာကို OR ကြိုတင်သဘောတူညီချက်ယူ, နှင့်အကြောင်းအရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်းအမေရိကန်ကြားတခြားဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအကြားသဘောတူညီချက်အားလုံးပြီးစီးသွားပါသီးသန့်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုယ်စားပြုမှု ဤပဋိညာဉျ။
ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေ၏မူပိုင် (ဂ) 2018 (s) ကို BESTFOREXEAS
အတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုင်စင်ရနှင့်အတူကျနော်တို့, ကိုယ်ပိုင်နှင့် BESTFOREXEAS က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုမူပိုင်ခွင့်နှင့်အခြားအသိဉာဏ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုထိန်းချုပ်; နှင့်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင် BESTFOREXEAS website နှင့်ပစ္စည်းအားလုံးမူပိုင်ခွင့်နှင့်အခြားအသိဉာဏ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု rights reserved နေကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားသောတိုင်းနိုင်ငံသို့မဟုတ်ဥပဒေဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏တရားကိုလိုက်နာမှသကဲ့သို့သုံးစွဲမှုကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ချက်များကိုပြုစုခဲ့သည်။ သင်ကသင့်ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏တရားကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ထင်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ထံကစကားကိုနားထောငျလိုသငျ့သညျ။